Shirkii Islaamka oo lagu xiray Jabuuti. - Caasimada Online
Home Warar Shirkii Islaamka oo lagu xiray Jabuuti.
Shirkii Islaamka oo lagu xiray Jabuuti.
Shirkii ay isugu yimaadeen wasiirada arimaha dibada ee dalalka Islaamka ee ku bahoobay Ururka iskaashiga islaamka ayaa si rasmi ah waxaa loogu soo gabagabeeyay Magaalada Jabuuti ee dalkaasi Jabuut,iyadoona laga soo saaray qodobo badan oo inta badan wax loogu qabanayo arimaha wadamo badan ay Soomaaliya ay ka mid tahay sidii loo taageeri lahaa.
gabagabada Shirka oo ay ka hadleen Mas’uuliyiinta shirka ka soo qeyb gashay ee ka socday wadamada Islaamka ayaa waxa ay dhamaantood cod iskuwada mid ah ay ku taageereen dowlada Soomaaliya islamarkaana ay balan qaadeen in Soomaaliya dhan walba laga taageerayo oo ay tusaale u soo qaateen dhaqaalaha Soomaaliya oo meel hoose maraya iyo in la caawiyo dowlada cusub ee iminka la dhameystiray sidii ay ugudan lahayd waajibadka horyaala.
Kulankaan oo mudo saddex cisho ah socday islmarkaana looga hadlayay amuuraha wadamo badan oo Soomaaliya ay ka mid tahay ayaa waxa la isla afgartay in Ururka iskaashiga islaamka uu taageero aan loo kala harin bixiyaan si ay u fududaato in Soomaaliya markale cagaheeda ay ku istaagto.
shirka inta uu socday waxaa hadalo ka jeediyay Mas’uuliyintii kala duwaneyd ee madasha kulanka ka soo qeyb gashay,waxa ayna dhamaantood ka sinnaayeen inay caawinayaan Soomaaliya.
Dowlada Soomaaliya ayaa waxaa kaga qeyb galay shirkaasi wasiirada arimaha dibada ahna Raysal wasaare ku xigeenka Marwo Foosiyo xaaji Yuusuf Aadan,taasi oo madasha kulanka ka sheegtay in loo baahan yahay in la caawiyo dowlada Soomaaliya ee hada hana qaaday.